भाइटीका लगाउँदा कुन दिशा फर्किने, कुन–कुन रङ्गको टीका बनाउने ? « Naya Page
भाइटीका लगाउँदा कुन दिशा फर्किने, कुन–कुन रङ्गको टीका बनाउने ?
काठमाडौं, १ मंसिर । आज (सोमबार) तिहारको मुख्य दिन । आज दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकअर्कालाई टीका लगाई दिएर भाइटीका पर्व मनाइँदै छ । भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ३७ मिनेटमा छ ।